Jiri akwa akwa na-arụ ọrụ nke ọma
Plọg ahụ nwere isi dị larịị, square isi ma ọ bụ akụkụ; Njikọ ihe dị na njedebe nke ọzọ iji chekwaa ngwakọta nke mkpụrụ osisi hex na mgbaaka na-acha uhie uhie. A na-etinye nke a na mmiri mmiri n'ime ahụ na-eme ka nkwụnye ahụ sie ike. A na-eji ọla kọpa mee ha, ọla, Galvanainenblack jiri ihe eji eme ihe dị ka ọdụ mmanụ.
N'oge ọkọchị, a na-enwe oke okpomọkụ nke ụlọ ahụ dakwasịrị ala site na sistemụ maka ajụ, na n'oge udu mmiri, a na-akụchasị okpomọkụ site n'ala. Dabere na Ngalaba Ike nke United States, ọnụ ahịa usoro dị otú a bụ ihe dị ka $ 7,500. Ngalaba nyocha nke ike na-egosi na na usoro nke ego eletrik, enwere ike ịzọta itinye ego n'ime afọ 2 ruo 10.
Ngwaọrụ ndị ọzọ Apple, yana inweta ego na ihe mkpali na-azụta maka ọrụ dịka ndenye aha ngwa, ihe nkiri nbudata na nchekwa iCloud. Ọ bụ ezie na uto na ahịa smartphone ejirila ọnụ ahịa enyerela Apple aka gbasaa ma gbasaa ahịa ya. Ihe omume Wenezde na-abịa na United States ga-enyefe tarifs na Ngwaahịa sitere na Chinas.